सक्किगोनीमा किन देखिन छोडे अर्जुन घिमिरे ‘पाडे’ ? – Sandesh Press
August 27, 2021 313
तै तपाईंहरूको सक्किगोनि पनि भित्रभित्रै त फु’टेको त हैन ? अर्जुन घिमिरे पाँडे नभएको सक्किगोनि पनि सक्किगोनिझैं भएको छ। हामीलाई पाँडे जसरी नि चाहियो।’‘पाँडे खोई चाइयो, नुनबिनाको तरकारीजस्तै भयो सक्किगोनि।’
सधैं उनको पर्खाइमा टेलिभिजन अगाडि रहने दर्शक भने महिनौंसम्म उनीलाई नदेख्दा निराश भइरहेका छन्। दर्शकलाई सधैं हँसाइरहने उनै अर्जुनका अगाडि भने यतिबेला आमा बि’रामी भएका कारण दुःखको पहाड उभिएको छ। आमालाई मस्तिष्कघा’त भएर अस्पताल भर्ना गरिएको कारण पाँडे बुढा सिरियलबाट टाढा रहेर आमाप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन्।
उनले थपे— ‘ममी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न तीन महिनादेखि ग्रिन सिटी अस्पतालमा संघर्षरत हुनुहुन्छ। भगवान् छन्, छैनन्, त्यो त थाहा भएन। यदि, छन् भने हाम्रो पुकार सुनेर आमालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिनोस्। हामी यही एउटा जी’वित आशा बोकेर उहाँलाई कुरिरहेका छौं।’नेपाल समाचारपत्र
Prevमृत आमाको काखमा सुतेका छोराको वियोगान्त दृश्य चित्रमा कोरियो
Nextसवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल १८ गतेबाट खुल्ने
नेपाल–चीन सीमा स्तम्भमा किन पुगे प्रकाश सपूत ?